Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:55 PM PC Knowledge, ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း
ဒါလေးလည်း အဖြစ်များတဲ့ problem လေးပါဘဲ
Video card,monitor, vga cable
Computer ကို ဖွင့်လိုက်တယ် power supply fan တေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်တယ် cpu fan တေလည်းအလုပ်လုပ်တာမြင်ရတယ် harddisk အလုပ်လုပ်သံတေလည်းကြားရတယ်ဆို computer တက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပီ
1.ီ ပီးရင် monitor ကို power ပေးဖို့ power switch နှိပ်ပီး power on လိုက်တယ် monitor logo တေ ပြပီး no signal ဆိုပီးပြတယ် အဲ့ဒါက ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး
ကတော့ video card error ပါ ဒါပေမဲ့ vga cable မကောင်းတာဆိုရင်လည်း no signal (or) isn't connect ...အဲ့လိုမျိုးလေးပြတယ်ဒါကြောင့်vga cable နောက်တစ်ကြိုးနဲ့စမ်းကြည့်ရင်ကောင်းသွားနိုင်တယ
computer system unit power on လိုက်တုန်းက system speaker သာကောင်းနေရင် bios အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပီး beep အသံလေးနဲ့ပြပါတယ် video card ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင် video card error ဆိုပီးတော့။
Video card လွတ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ပျက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဖုန်တေကြာင့်ကြောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒါကြောင့် video card ကို ဖြုတ် ရွှေရောင်ကြည်းချောင်းလေးကို ခဲဖြတ်နဲ့တိုက် video card slot ကိုလည်းbrush နဲ့ clean ပေးပိးရင် ပြန်တက်ပေးလိုက် video card မပြတ်ရင်တော့ ပြန်ကောင်းလာမှာမှာ ရုပ်မတက်လာရင်တော့ video card ပျက်တာ ကြိမ်းသေနေပီ သေချာသွားအောငိထပ်စမ်းချင်သေးရင် video card က pcie ဆိုရင် တခြား pcie slot မှာ ပြောင်းတက်ကြည့် slot ကြောင်တာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ နညိ်းပါတယ်ဗျ slot တေက အဲ့လိုမဖြစ်တတ်ပါဘူး
2. နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရှင်းပါတယ် monitor power ဖွင့်လိုက်လို့ monitor power ကိုက မတက်
ဘာ logo မှ မမြင်ရတော့တာ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ monitor switch ပြတ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင် အထဲက circuit တေ ပျက်တာဖြစ်နိုင်တယ် tv ပြင်ဆိုင်သာပို့လိုက်ပါတော့
Computer တကျပီး monitor မှာ ဘာမှမပျေါသညျ့ ပွသနာ အဖွရှောကွညျ့ခွငျး
[Unicode]ဖတျရနျ Computer တကျပီး monitor မှာ ဘာမှမပျေါသညျ့
ဒါလေးလညျး အဖွဈမြားတဲ့ problem လေးပါဘဲ
Computer ကို ဖှငျ့လိုကျတယျ power supply fan တလေညျးကောငျးကောငျးမှနျမှနျအလုပျလုပျတယျ cpu fan တလေညျးအလုပျလုပျတာမွငျရတယျ harddisk အလုပျလုပျသံတလေညျးကွားရတယျဆို computer တကျတယျလို့ယူဆလို့ရပီ
1.ီ ပီးရငျ monitor ကို power ပေးဖို့ power switch နှိပျပီး power on လိုကျတယျ monitor logo တေ ပွပီး no signal ဆိုပီးပွတယျ အဲ့ဒါက ဖွဈနိုငျခွအေရှိဆုံး
ကတော့ video card error ပါ ဒါပမေဲ့ vga cable မကောငျးတာဆိုရငျလညျး no signal (or) isn't connect ...အဲ့လိုမြိုးလေးပွတယျဒါကွောငျ့vga cable နောကျတဈကွိုးနဲ့စမျးကွညျ့ရငျကောငျးသှားနိုငျတယ
computer system unit power on လိုကျတုနျးက system speaker သာကောငျးနရေငျ bios အမြိုးအစားပျေါမူတညျပီး beep အသံလေးနဲ့ပွပါတယျ video card ကွောငျ့ဖွဈတာဆိုရငျ video card error ဆိုပီးတော့။
Video card လှတျသှားတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ ပကျြတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ ဖုနျတကွောငျ့ကွောငျတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ ဒါကွောငျ့ video card ကို ဖွုတျ ရှရေောငျကွညျးခြောငျးလေးကို ခဲဖွတျနဲ့တိုကျ video card slot ကိုလညျးbrush နဲ့ clean ပေးပိးရငျ ပွနျတကျပေးလိုကျ video card မပွတျရငျတော့ ပွနျကောငျးလာမှာမှာ ရုပျမတကျလာရငျတော့ video card ပကျြတာ ကွိမျးသနေပေီ သခြောသှားအောငိထပျစမျးခငျြသေးရငျ video card က pcie ဆိုရငျ တခွား pcie slot မှာ ပွောငျးတကျကွညျ့ slot ကွောငျတာဖွဈမှာစိုးလို့ပါ ဖွဈနိုငျခွတေော့ နညျိးပါတယျဗြ slot တကေ အဲ့လိုမဖွဈတတျပါဘူး
2. နောကျတဈမြိုးကတော့ ရှငျးပါတယျ monitor power ဖှငျ့လိုကျလို့ monitor power ကိုက မတကျ
ဘာ logo မှ မမွငျရတော့တာ အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ monitor switch ပွတျတာဖွဈရငျဖွဈမဟုတျရငျ အထဲက circuit တေ ပကျြတာဖွဈနိုငျတယျ tv ပွငျဆိုငျသာပို့လိုကျပါတော့
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:55 PM